July 2020 – Gulled Salah
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada Magaalada Boocame.
Waxaa maanta wafdi ka socda Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland kormeer ku sameeyeen xafiisyada Ururada Siyasadda Puntland ee magaalada Boocame, Gobolka sool. Gudiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa waday kormeer maalmihii udanbeeyay ay ku sameenayeen xafiisyada Ururada Siyasadda si loo hubiyo in Ururadu leeyihiin xarumo leh astaamihii lagu xusay habraaca isdiiwaangelinta Ururada Siyaasadda Puntland. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la shiray maamulka Gobolka Bari.
Wafdigii Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland ee ku sugnaa magaaladda Boosaaso ayaa saaka la shiray maamulka Gobolka Bari oo uu hormuud u ahaa Guddoomiyaha Gobalka Mudane Cabdisamad Abwaan, waxaana kasoo qayb galay Guddoomiye KXG Gobolka, Taliyaha Qaybta Booliiska iyo masuuliyiin kale.Uieedka kulanka ayaa ahaa isxogwaraysi iyo dardargelinta wacyigelinta bulshada dhinacyada dimuqraadiyadda iyo hirgalinta hannaanka xisbiyada badan …
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la shiray maamulka Gobolka Bari. Read More »
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada magaalada Boosaaso.
Waxaa maanta wafdi ka socda Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa kormeer ku sameeyey xafiisyada Ururada Siyasadda Puntland ee magaalada Boosaaso, Gobolka Bari. Gudiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa maalmihii udanbeeyay waday kormeer ay ku sameenayeen xafiisyada Ururada Siyasadda si loo hubiyo in Ururadu leeyihiin xarumo leh astaamihii lagu …
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada magaalada Boosaaso. Read More »
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada magaalada Qardho.
# Waxaa maanta wafdi ka socda Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland kormeer ku sameeyeen xafiisyada Ururada Siyasadda Puntland ee magaalada Qardho, Gobolka Karkaar.Gudiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa maalmihii udanbeeyay waday kormeer ay ku sameenayeen xafiisyada Ururada Siyasadda si loo hubiyo in Ururadu leeyihiin xarumo leh astaamihii lagu xusay habraaca isdiiwaangelinta Ururada Siyaasadda Puntland.